देशैभर सडक अस्तब्यस्त, सरकार भने रेल र पानीजहाजको गफमै मस्त ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
देशैभर सडक अस्तब्यस्त, सरकार भने रेल र पानीजहाजको गफमै मस्त !
काठमाडौं, २७ असार । मुलुकका प्रमुख राजमार्गहरु यतिबेला जुनसुकै बेला जहाँ पनि पहिरो र वाढीको जोखिममा छन् । पछिल्लो १ सातामा मात्र पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नारायणघाट सडक ४ पटक पहिरोले बन्द भइसक्यो । यससडक खण्डको गाईघाट नजिक अकस्मात सडक भाँसिएपछि आवागमन एकतर्फी भएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गका पुलहरु पनि उत्तिकै जोखिममा छन् भने तराईका भित्री सडकसमेत बाढीको चपेटामा छन् । पहाडी क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने सडकमा पहिरो आए उद्दारमा तदारुकता देखाइन्छ, तर अन्य ग्रामीण सडक त अब पुनःसञ्चालनका लागि दसैं नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकार भने केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र रक्सोल–काठमाडौं रेल सेवा विस्तार गर्ने प्रचारबाजीमै रमाइरहेको छ । यीमध्ये कुनै पनि आयोजनाको अध्ययनसमेत भएको छैन ।
केरुङ–काठमाडौं रेल प्रतिफलका दृष्टिले लगानीयोग्य नरहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भइसकेको छ।
बरु, उनी जलमार्गबारे अध्ययन नै नभए पनि पानीजहाजको उद्घाटन समारोहको निमन्त्रणा बाँड्दै हिँडिरहेका छन् ।